यस्ता थिए जनयुद्ध सुरु गर्दाका ७ प्रतिबद्धता, कति भए पुरा, कति रहे अधुरा ? — Sanchar Kendra
यस्ता थिए जनयुद्ध सुरु गर्दाका ७ प्रतिबद्धता, कति भए पुरा, कति रहे अधुरा ?
काठमाडौँ । आज जनयुद्ध सुरु गरिएको दिन । २०५२ साल फागुन १ गतेबाट नेपालमा जनयुद्ध सुरु भएको थियो । राजतन्त्रत्मक राज्य व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै नेपालमा जनवादी सत्ता स्थापन गर्ने उद्देश्यले जनयुद्ध सुरु भएको २४ बर्ष पूरा भएको छ ।